Tag: dhererka muuqaalka | Martech Zone
Tag: dhererka muuqaalka
4 Istaraatijiyadaha Muhiimka u ah Ganacsigaaga Meelaha badan ee Khadka Tooska ah
Jimco, Janaayo 5, 2018 Axad, Janaayo 7, 2018 Douglas Karr
Maaha tirakoob la yaab leh, laakiin wali waa wax lala yaabo - in ka badan kalabar dhammaan iibka dukaamada waxaa saameyn ku yeeshay dijitaal sanadkii hore bogooda ugu dambeeyay ee ku saabsan suuqgeynta meheraddaada goobaha badan ee internetka. MDG waxay baaris ku sameysay isla markaana tilmaamtay afar xeeladood oo muhiim u ah suuq geynta dijitaalka ah in meherad walba oo meela badan ku taal la geeyo taasi oo ka kooban raadinta, barmaamijka, waxyaabaha ku jira, iyo aaladaha aaladda. Raadin: Ku habboon "Hadda Fur" iyo Goobta - Macaamiisha ayaa ka beddelaya raadinta waxyaabaha mustaqbalka ku saleysan sida
Dhererka Mawduuca: Feejignaanta Feejignaanta Ka-Qaybgalka
Isniin, November 14, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
In ka badan 10 sano ka hor, waxaan qoray in dareenka dareenka uu sii kordhayo. Intii aan la shaqeyneynay macaamiisha sannadihii la soo dhaafay, tan ayaa sii socota in la caddeeyo in kasta oo quraafaadku yahay in akhristayaasha, daawadayaasha, iyo dhagaystayaashu aysan ku dhegi doonin. La-taliyayaashu waxay sii wadaan inay sheegaan in muddooyinka dareenka la dhimey, waxaan ugu yeeraa bollox. Waxa isbeddelay waa xulasho - oo na siineysa fursad aan si deg deg ah uga boodno waxyaabo aan khusayn, tayo liidata, ama waxyaabo aan ku lug lahayn si aan u helno waxyaabo aad u wanaagsan. Markii ugu horeysay ee aan bilaabay